Kangton - Ọnụ ụzọ - Kangton Industry, Inc.
Wepụ ọnụ ụzọ osisi
Ọnụ ụzọ siri ike/mkpuchi
Ọnụ ụzọ kpụrụ akpụ HDF
Ọnụ ụzọ mpụga
Eriri Glass Door
Ọnụ ụzọ siri ike/Pivot
Ọnụ ụzọ nchara
Ọnụ ụzọ gosiri ọkụ
SPC siri ike
Osisi SPC flooring
Ọnụ ego WPC
Nkezi ụlọ nwere ọnụ ụzọ ime ime 10+. Ọ dịghị onye n'ime ha kwesịrị ịbụ nkezi. Nyochaa nhọrọ niile ma nweta mmụọ nsọ. Ihe niile sitere na ọnụ ụzọ oghere nke HDF, ọnụ ụzọ siri ike ejiri aka mee, ọnụ ụzọ osisi siri ike, ọnụ ụzọ mbata, ụzọ mechiri emechi, wdg. ogwe iko, ogwe niile, bifold, na ọnụ ụzọ mara mma.
Ihe mbụ ị ga -ahụ kwesịrị inwe mmetụta na -adịgide adịgide. Ọ ga-enwekwa ike iguzogide ihe ndị dị na ya.Handcrafted soild osisi ụzọ site na ihe ndị kachasị mma maka ọmarịcha ịma mma na ogologo ndụ, ọnụ ụzọ mpụga nchara na-enye nchekwa na nchekwa, ọnụ ụzọ fiberglass na-egosipụta udidi ncha-ahịhịa-strok nwere ike ịcha agba ọ bụla.
"Okwu a bụ 'oke-ọkụ' pụtara na ọnụ ụzọ, mgbe etinyere ya nke ọma, ekwesighi ịgba ya ọkụ n'oge ụfọdụ n'ime ọkụ na-adịkarị." Ọ bụ ezie na ntule oge na-adịgasị iche, ọ na-ekwu na ntụle ọkọlọtọ gụnyere ọnụ ụzọ nkeji 20 ruo 90.
Copyright - 2004-2021: Ikike Niile Echekwabara.